Ethioipa iyo ONLF oo wadahadallo ku yeeshay Washington - BBC Somali
Ethioipa iyo ONLF oo wadahadallo ku yeeshay Washington
3 Agoosto 2010
Image caption Ethiopia Ogadenia Map
Wadahadallo nabadeed oo dhex maray dawladda Ethiopia iyo garab ka mid ah jabhadda ONLF ayaa lagu soo gabgabeeyey magaalada Washington ee dalka Maraykanka.
Wadahadaladan oo socday labadii maalmood ee la soo dhaafay ayaa waxaa ka soo baxay qodoba labada dhinacba ay isku raaceen, oo ah in shirweyne loo dhan yahay oo ay iskugu yimaaddaan dhinac ONLF ee nabadda qaatay, gobolka ismaamulka Somalida, iyo dawladda dhexe ee federaka ah ee Ethiopia in lagu qabto gudaha dalka Ethiopi, laguna kala saxiixdo heshiiska nabadda ee kama dambaysta ah.
Image caption Miliishiyada ONLF
Haddii wadahadalladani si buuxda u hirgalaanna, waxa dhici karta inuu soo afjarmo dagaakii dabada dheeraa ee sanadaha badan ka socdey gobola Somalida ee dalka ethiopia, kaasi oo dad badani ay ku dhinteen, keenayna barakac, qaxooti, iyo deganaansha la'aan, ilaa 50-kii sano ee ugu danbeeyey.
Wadahadalladani magaalada Washington, wafdiga ethiopia oo ka koobnaa wasiirro iyo saraakiil kale, waxa hoggaaminayey gudoomiyaha Xisbiga Dimoqraadiga Somalida Ethiopa, Abdifatah Sheekh Cabdulaahi. Dhinaca kalena waxa hogaaminayey DR Saluxudiin Cabdiraxmaan Hagi Macow oo ah Godoomiyaha garabka ONLF ee heshiika la gaadhay Ethiopia.
Labada dhinac waxay hore ugu kulmeen Magaalada Franfurt ee dalka Jarmalka bishii June ee sanadkan, waxayna mabda' ahaan ku heshiiyeen in la bilaabo waahadallo nabadeed. Kulanka haatan ee magaalada Washington-na waxa lagu tilmaamay inuu ahaa mid lagu sii ambaqaadayo waahadalladaasi hore, laguna sii dhammaystirayo qodobada heshiiska la kala saxiixan doono.
Image caption WSLF oo saxiixday heshiis
Toddobaadki horena, Jabhadda Soomaali Galbeed ee WSLF, oo iyana ka mid ah Jabahadaha la dagaallama Ethiopia, ayaa heshiis la gashay dowladda federaalka ee Ethiopia.Munaasbad ka dhacday Addis Ababa saaka, ayaa Wasiirka Federaalka ee Ethiopia wuxuu heshiis dagaalka lagu joojinayo uu la saxiixday Guddoomiyaha Jabhadda WSLF, Shiikh Ibraahim Maxamed Xuseen, waxana qodoaa heshiiskaas ka mid ahaa in Ethiopia ay sii deyso dhammaanba xubnaha WSLF ee ku jira xabsiyada, taaso oo durba inteedii banayd la fuliyey.
WSLF waxay iyana dhinaceeda aqbashay inay u hoggaansamayso, kuna dhaqamayso datuurka federaalka ah ee Ethiopia.
Heshiisyadaasi magaalada Addis Ababa, waxa kale oo goob joob ahaa Ergo ka socota Puntland iyo taageerayaal WSLF oo dibadda ka yimid.